10 Astaamood Oo Ka Maqan Blog-gaaga | Martech Zone
Talaado, July 21, 2009 Thursday, April 28, 2016 Douglas Karr
Qaar ka mid ah jawaab celin aan ka helay akhristayaasha waa inaanan bixinaynin jawaab celin badan oo ku saabsan baloog garaynta Martech Zone. Marka - maanta waxaan u maleynayay inaan qaadan lahaa qaab ka duwan oo aan fiiriyo tiknoolajiyada ku wareegsan barnaamijkaaga qorista si aan u siiyo akhristayaasha liistada hubinta ee astaamaha si ay dib ugu eegaan oo ay u hubiyaan in balooggoodu leeyahay.
Robots.txt - Haddii aad tagto xididka (cinwaanka saldhigga ah) ee boggaaga, ku dar robots.txt cinwaanka. Tusaale: https://martech.zone/robots.txt - ma jiraa fayl halkaa yaalla? Faylka robots.txt waa feylal rukhsad aasaasi ah oo u sheegaya mashiinka raadinta bot / spider / crawler waxa hageyaasha la iska indhatirayo iyo waxa ku saabsan gurguurashada Intaas waxaa sii dheer, waxaad ku dari kartaa xiriiriye khariiddada boggaaga dhexdeeda! Midna ma lihid? Fur notepad ama boodhka qoraalka oo samee naftaada… kaliya raac tilmaamaha ku qoran Robotstxt.org
Khariidadda bogga.xml - Khariidad deg deg ah oo la soo saaray ayaa ah qayb muhiim ah oo siisa matoorada raadinta a map meesha mawduucaagu ku yaalo, sida ay muhiimka u tahay, iyo goortii ugu dambeysay ee la beddelay. Illaa iyo hadda matoorka khariidadda bogga ugu fiican ee aan abid adeegsado waa Generatorka Khariidadda Khariidadda bogga ee Arne Brachhold. Waxay sidoo kale u gudbisaa khariidadda bogga Live / Bing, Yahoo !, Google iyo Weydii! (marka adeegga gudbinta ee Ask ay shaqeyneyso).
Muuqaalka Warbaahinta Bulshada - Waxaan hayaa liis dhamaystiran oo bogag ah oo aad iga heli karto anigoo ka qayb qaadanaya baraha bulshada. Xusuusnow - balooggaagu had iyo jeer maahan in qof u socdo! Mararka qaar isku xirnaanta baraha bulshada iyo saaxiibtinimada kuwa danta guud waxay gacan ka geysan kartaa kor u qaadista balooggaaga dhagaystayaal ku habboon… oo ka baxsan bartaada. Qeybta kore ee midig, waxaad ka heli doontaa dhowr goobood oo aad iga heli karto! Hubso inaad igu darto saaxiib, waan soo celin doonaa.
Awoodsiinta Wadajirka - Isticmaalka internetka mobilada ayaa sii kordhaya! Blog-gaaga ma laga akhrisan karaa shaashadda moobiilka? Wixii WordPress ah, waxaa jira WordPress Moobil Mobaylka ku habboon oo sameeya goobta loogu talagalay moobiilka iyo xitaa isticmaalka iPhone Safari.
Description - Haddii aan ku dego mid ka mid ah bogaggaaga keliya ee bloggaaga, ma ogaan lahaa waxa ku saabsan? Mararka qaarkood way adagtahay in si fudud wax loogu sheego adoo aqrinaya qoraal. Haysashada sharraxaad fiican ee dhinacaaga dhinaceeda nooca noocee ah ee aad bixiso waxay muhiim u noqon kartaa helitaanka akhristayaasha inay is-qoraan ama soo noqdaan.
Form Contact - Waxaan la yaabay tirada boggaga internetka ee aan macno lahayn meel ka baxsan goobta faallooyinka si loola xiriiro blogger-ka! Miyaad leedahay xiriiriye hagitaan oo tilmaamaya Foomka Xiriirka? Foomamka xiriirku waa ka faragelin yar yihiin lambarka taleefanka oo khatar kuma gelinayaan inaad u dhaafto cinwaanka emaylka.
Ku Saabsan Bogga - Yaad tahay adiga maxaanse kuugu kalsoonahay? Xitaa haddii ay qosol dareento in la qoro bog ka hadlaya guulihii aad gaadhay… adiga maahan adiga, ee waa booqdayaasha. Sii xoogaa tilmaamo ah sababta ay kuu dhageysanayaan.
Icon - Markii ay soo ifbaxeen daalacashada la hubo, way fududahay in la kala saaro bartaada iyadoo lagu darayo astaan. Haddii aadan aqoon sida, si fudud u isticmaal a Matoor Favicon si aad u sameyso feylka ico (icon) oo aad ugu shubto galka asalka ah ee shabakadaada. Faylasha kale ee muuqaalka ah ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa, ama sawirro ama astaamo lagu marti geliyey meelo kale - cusboonaysii isku xidhka astaanta toobiye madaxaaga.
Afeef - Haa, waa lagaa dacwayn karaa waxa aad ku daabacdo bartaada. Badbaadso naftaada iyo hantidaada adoo hubinaya inaad haysatid wax weyn Afeef!
Isdhexgalka Warbaahinta Bulshada - Ku dhaji adoo maraya Twitter la Hootsuite, LinkedIn, Email kuugu soo dir, Facebook iyo isuduwaha waa aalad awood badan, isticmaal is-biirinta ilaa ay tahay awoodda ugu badan!
Tags: ku saabsan boggasharaxaadda blogfoomka xiriirAfeeficonmuuqaalka moobiilkarobots.txtKhariidadda boggabadhamada bulshadaisdhexgalka bulshada
Jul 22, 2009 markay ahayd 3:58 AM
Waad ku mahadsantahay iskuxirka iyo liistada tilmaamaha. Waxaad leedahay qodob aad ansax u ah oo ku saabsan sharaxaada iyo sheegashada. waxaan kudarsanayaa barteyda sidookale 🙂.
Jul 22, 2009 markay tahay 5:13 PM
Tani waa liis wanaagsan. Waxaan hayaa maqaal bahal ah oo isla mawduucan ka baaraandegaya, waxaan ku soo rogi doonaa dhowr ka mid ah sidoo kale waxaanan dib ugu laaban doonaa deyn ahaan dabcan.
Jul 22, 2009 markay tahay 11:32 PM
Waxaan dhowaanahan ku qaylinayay sida ay u adag tahay in laga helo macluumaadka xiriirka bogagga internetka oo aanan wax intaas ka badan kugula heshiin karin. Waa maxay heshiiska weyn? Kadib - oops - Waxaan ogaaday inaanan haysan waddo fudud oo aan ku daro.
Jul 23, 2009 markay tahay 2:29 PM
Talooyin badan oo wanaagsan halkan, iyo 'hubin' wanaagsan oo loogu talagalay bloggers. Mahadsanid!
Ashish @ Magik Dulucda
Jul 14, 2011 markay ahayd 6:58 AM
Tilmaamo fiican Douglas, waxaan u maleynayaa inaad ku darto waxyaabaha soo socda robots.txt sidoo kale
Dejinta # Crawlers
# Mashiinka Khadka Internetka ee Wadada Wadista
Wakiilka isticmaalaha: ia_archiver
# digg muraayad
Wakiilka isticmaalaha: duggmirror
Hubi qoraalka gelitaankaaga oo u diid caaradaas maxaa yeelay waxay kaa xadaan xawaarahaaga oo waxay ka dhigaan goobtaada inaan la heli karin booqdayaasha muddo gaaban.